Fact onaSwiss national heldapress conference on 10th March 2018 as his entry-visa to Myanmar got rejected from Myanmar Embassy in Bangkok – Ministry of Foreign Affairs
Fact onaSwiss national heldapress conference on 10th March 2018 as his entry-visa to Myanmar got rejected from Myanmar Embassy in Bangkok
According to The Standard Time Daily Newspaper, it is learnt that Mr. Lamont Unni Christen,aSwiss national heldapress conference and complained that his visa got rejected by Myanmar Embassy in Bangkok.
In fact Myanmar Embassy in Bangkok didn’t reject his visa application and he was just requested to wait for visa scrutinizing time.
မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့မှ ဗီဇာခွင့်မပြုသည့်အပေါ် ၁၀-၃-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ် စံတော်ချိန်သတင်းစာပါ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ရပ်မှန်အား ဖော်ပြခြင်း
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားဖြစ်သူ Mr. Lamont Unni Christen သည် ၂၈-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိ အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ခွင့် လုပ်ငန်းဗီဇာ လျှောက်ထားခဲ့ရာတွင် မြန်မာသံရုံးမှ ဗီဇာထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာဖြင့် ဝင်ရောက်လာပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း စံတော်ချိန်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။
မြန်မာသံရုံး၊ ဗန်ကောက်မြို့အနေဖြင့် ဗီဇာထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ Mr. Lamont Unni Christen နှင့်ပတ်သက်၍ ရရှိထားသည့် သတင်းများ မှန်ကန်မှု ရှိ-မရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသို့ အတည်ပြုမေးမြန်းထားဆဲ ဖြစ်၍ ဗီဇာထုတ်ပေးရန် ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။